GlobalConnect သည်ဝေးလံသောထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုများအတွက် Nevion Virtuoso နှင့် VideoIPath ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » GlobalConnect ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုနှင့်အလှူငွေများအတွက် Nevion virtuoso နှင့် VideoIPath ဖြန့်ချထား
Nevionvirtualized မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်၏, ဆုရပံ့ပိုးပေးကြောင်းယနေ့ကြေညာလိုက်ပါတယ် GlobalConnect တပ်ဖြန့်ထားသည် Nevion virtuoso, ဆော့ဖ်ဝဲ-သတ်မှတ်ထားသောမီဒီယာ node ကိုနှင့် Nevion VideoIPath, အ orchestration နှင့် Sdn ထိန်းချုပ်မှုဆော့ဖျဝဲ, ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုနှင့်အလှူငွေ application များအတွက်။ ဖိုင်ဘာကွန်ယက်ကို, ဒေတာစင်တာများနဲ့ cloud ဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေး, ဒိနျးမတျဘောလုံးလိဂ်၏ဦးဆောင်မီဒီယာပံ့ပိုးပေးဝတ်ပြုဖို့ဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု. Superliga အဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောလက်ပစ်ဘောလုံးကဲ့သို့အခြားအားကစားများဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုကိုထောကျပံ့ဖြစ်ပါတယ်။
GlobalConnect တစ်ခုနောက်ဆုံးရွှေ့ပြောင်းဖို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလမ်းကြောင်းနှင့်အတူချုံ့နှင့် compressed လုပ်မထားတဲ့နှစ်ဦးစလုံးန်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်မယ်လို့င်း၏လက်ရှိအခြေခံအဆောက်အဦများနေရာတွင်အစားထိုးအသစ်ဖြေရှင်းချက်လိုအပ် SMPTE ST 2110 ။ စေလွှတ်မတိုင်မီက Nevion'' s ကိုဖြေရှင်းချက် GlobalConnect Superliga OB ဗင်အတွက်တစ်ဦးတည်းသာ 10G ဖိုင်ဘာဆက်သွယ်မှုယနေ့အသုံးပြုသည်အဘယ်မှာရှိသနည်း OB ဗန်တစ်ခုပြင်ပတွင်ကက်ဘိနက်ထဲကနေမျိုးစုံအသံ, ဗီဒီယိုနှင့်ကွန်ရက်ကေဘယ်လ်ကြိုးသုံးပြီး feeds မှတဆင့်ကူးစက်သော။
အသစ်ဖြေရှင်းချက် features တွေ Nevion ဝှက်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖို့အသုံးပြုလျက်ရှိသောလေယာဉ်တင်သင်္ဘော-class ကို virtuoso MIS, HD ဘောလုံးရီနာကှငျးကနေ real-time အတွက် (JPEG,4သုံးပြီး) နှင့် 2000K / UHD feeds တွေကို။ သူတို့ကအစအိမ်ရှင် GlobalConnect ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်ကျွေးမွေးပေးနိုင်ငံတဝှမ်း4OB ကုန်တင်ကားများနှင့်2မိုဘိုင်းယူနစ်စုစုပေါင်းအပေါ်တပ်ဖြန့်နေကြသည်။ Nevion VideoIPath အထူးသဝန် balancing နှင့်ပွင့်နေချိန်အတွင်းသေချာ, ကွန်ယက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် orchestrates ။
ပညာရှင် Hans Hasselbach, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အရာရှိချုပ်, Nevion
GlobalConnect မှာ Anders Kuhn Saaby, CTO said: "ကျနော်တို့နှင့်အတူကြာမြင့်စွာ-ရပ်တည်မှုဆကျဆံရေးရှိ Nevion အရာအချိန်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက် fit မှထုတ်ကုန်သို့အင်္ဂါရပ်တောင်းဆိုမှုများကိုအစာကျွေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ တစ်ဦးဘက်ပေါင်းစုံဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေခံအဆောက်အအုံပံ့ပိုးပေးသည့်အတိုင်းကျနော်တို့အိုင်ပီဖှံ့ဖွိုးတိုးဖို့ SDI ၌ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားရှိသည်နှင့် Nevion IP ကိုမှရွှေ့ပြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမအဆင့်အတွက်နျဆာပခဲ့သညျ။ "
ပညာရှင် Hans Hasselbach, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အရာရှိချုပ်, Nevion, commented: "ကျနော်တို့ 2012 ကတည်းက GlobalConnect နှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့ကြပြီးကျနော်တို့နေဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ multitenant နှင့်မိုဘိုင်းအခြေခံအဆောက်အအုံအစိတ်အပိုင်းများကိုအသစ် features တွေပိုမိုအကြိုးခံစားခှငျ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့မြျှောလငျ့ဘယ်မှာ VideoIPath အပါအဝင်ဤအချိန်အတွက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုနံပါတ်, ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့က IP ကိုထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို transitions အဖြစ်အနာဂတ်မှာ GlobalConnect နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဆက်လက်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
GlobalConnect မြောက်ပိုင်းဥရောပတစ်ဦးဦးဆောင်နည်းပညာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Group မှမြေကြီးမှသည်မိုဃ်းတိမ်မှပြည့်စုံဆက်သွယ်ရေးဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ အဆိုပါဖြေရှင်းချက်ကိုဖိုင်ဘာကွန်ယက်နှင့်ဒေတာစင်တာ 42,000 စတုရမ်းမီတာ၏ 18,000 ကီလိုမီတာပါဝင်သည်ဟု GlobalConnect ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခြေခံအဆောက်အအုံအပေါ်အခြေခံထားတယ်။
အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်အများပြည်သူကဏ္ဍရန်နှင့်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများသည် - GlobalConnect ကဏ္ဍအားလုံးတွင် 24,000 B2B ဖောက်သည်ရှိပြီးဖုံးလွှမ်း.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အထောက်အပံ့ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-19
ယခင်: Vionlabs '' အသစ်ဖြန့်ချိအကြောင်းအရာ Discovery ပလက်ဖောင်း IBC2019 မှာ Show ကိုအကောင်းဆုံးအနိုင်ရ
နောက်တစ်ခု: ATEME NPC မီဒီယာမှာအပြည့်အဝ-IP ကိုလုပ်ငန်းအသွားအလာ & Multi-screen ကိုန်ဆောင်မှုများကိုဖွင့်